Deeqdii ugu horaysa Diyaarado u sida gobolada dhexe oo ka degay Guura Ceel gobolka Galgaduud. | All idamaale News
Deeqdii ugu horaysa Diyaarado u sida gobolada dhexe oo ka degay Guura Ceel gobolka Galgaduud.
Deeq Gar-Gaar ah oo ka timid magaalada Muqdisho ayaa 18 Bishan ka degtay Magaalada Guura ceel ee gobolka Galgaduud taas oo loogu talagalay dadka abaartu saamaynta xoogan ku yeelay.
Madaxwaynaha maamulkaasi Shiikh Shaakir oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa deeqdaasi uga soo wareejiyey dawlada federalka Soomaaliya isagoo ku wareejiyey gudiga abaaraha maamulkaasi iyo madaxwayne ku xigeenka.
Deeqdan oo ahayd tii ugu horaysay ee uga timid dawlada dhexe Soomaaliya ayaa la gaarsiiyey 2 Diyaaradood kuwaas oo raashin siday waxaana gudiga abaaraha ay sheegeen inay gaarsiinayaan dadkii loogu talagalay ayna yihin kuwo aad ugu baahan.
Cali Baashi Faarax Cali Madaxweyne ku xigeenka Maamulka gobolada Dhexe Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa dhaliil u jeediyey gudiga abaaraha Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay lacago badan ay bixiyeen ayna hayaan dadkana aysan waxba kasoo gaarin.
Shiikh Xassan Cali Cumar oo ku hadlayey Afka gudiga gurmadka abaaraha ee gobolada Dhexe ayaa sheegay inay la wareegeen deeqdaasi raashinka ayna u bixinayaan sidii loogu talagalay.